Warshadaynta - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
warshadaha Shirkadaha soo saara alaabada waaweyn waxay sidoo kale u baahan yihiin madal ay ku soo bandhigaan oo ay abuuraan hoggaan. Tani waxay u kori kartaa si xad dhaaf ah haddii ay isticmaalaan internetka si ay u muujiyaan alaabtooda. Aad bay muhiim ugu tahay iyaga inay dareenkooda ka dhigaan dhegaystayaal kala duwan oo kala duwan iyada oo loo marayo qaab iyo halabuur gaar ah. Waxaan kaa caawineynaa inaad tan gaarto.
Maxaan ku qabanaa NewGenApps ?
Waxaan la shaqeynaa saarka warshadaha iyaga oo abuuraya barnaamijyo gaar ah si ay ganacsigooda ugu horumariyaan shabakada, u abuuraan una raad raacaan tilmaamaha, oo ay u yareeyaan kharashaadka isgaadhsiinta, marka lagu daro indhuhu soo jiidanayaan naqshadaha garaafyada. Wax-soo-saarayaashu waxay si gaar ah u bartilmaameedsadaan ganacsiga ilaa ganacsiga (B2B) iibinta taas oo aad uga duwan suuqgeynta ku saleysan macaamiisha. Mareegaha noocan oo kale ah waxay ku xiran yihiin xaqiiqooyinka dhabta ah, tirooyinka, sawirada, kartida adeegga, iyo ROI. Mwarshadaha waxsoosaarka ee maanta waa inay iska daayaan hababkii dhaqameed ee suuq -geynta dibedda waana inay la qabsadaan istiraatiijiyadihii suuqgeynta gudaha ee ugu dambeeyay si ay u soo jiitaan saamayn togan oo aad u weyn ganacsigooda. Newgenapps wuxuu daryeelayaa dhammaan baahiyahan gaarka ah ee u soo baxa horumarinta web ama apps u gaar ah saarka warshadaha. Laga soo bilaabo naqshadaynta iyo horumarinta ilaa abka gaarka ah, SEO, iyo warbaahinta bulshada, waxaanu kaa caawin doonaa inaad shirkadu ka tagto tartamayaasha meel fog.
Xirfadahayaga xagga warshadaynta
1. Adeegyada daruuriga ku salaysan
2. Caado Barnaamijyada Moobilada, Iyo qaabeynta bogga
3. Dhaqdhaqaaqa ganacsiga xal
4. Horumarinta Ganacsiga
5. Calaamadeynta iyo meelaynta soo -saarayaasha iyo alaabtooda
6. Soo saar wax badan oo ganacsigaaga ah
7. SEO, blogging, iyo warbaahinta bulshada marketing
8. Dib u eeg oo nadiifi mareegaha si aad u ilaaliso waxa ku jira mareegaha
9. Xalalka AWS